Shaqada raaxada aasaasiga ee biyaha ee uu fursan ee uu uu uu fursan ee uu uu uu uu furay, safarka u baahantahay u soo guuda
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Goobta codsiga ah>Aasaasiga birta fidiyay
Sidoo kale aqoonta birka la fidiyaa waxaa ka sameyn karaa dabaylka karbon, salka la'aanta, alumiinium, naabas, iyo sidanba. Dad badan oo dhan waxaa lagu go’aamiyaa in ay u isticmaaleyso uu uu fursan ee furan oo uu isticmaaleyso. Taas waxaa laheyno waxaa sidoo kale looga isticmaali kartaa jidiyaduun, iskuulka, maktabada, isbitaalka, guriga xafiiska, luuqada weyn iyo sida badan.
Biiladda la’aanta ee la siirayso
L alaabta: salka ka hooseeya, salka la'aanta, aluminium, aluminium, aluminium, baab, naabir, titanium, nikel.Maamulka ee aarga birta aasaasiga aasaasiga ah ah
Daryeelka ee aawadeed: PVC booska la xiriirtay, la kuleyso, korontada.
I qabta: 0.4 mm saacadaha 0.8 mm.
I meesh: 8 × 16 mm, 10 × 20 mm, 2 × 25 mm, safarka gaar ah.
Shaqada ee qareystaya
Wax wanaagsan ee muuqada ee cusboon ah.Halka ee aasaasiga birta ee fidiyada
Daryeelka miisaanka ee weyn.
Waxaan ka reebtaa qorraxdu in uu iftiin indha dadka.
I dabaysha wanaagsan.
Waxaan u dhigaa sauxda oo qaataa biyaha.
Miisaan fudud ah, waxaa sah ah.
Codsiyada ee aqoonta birta ee fididka
Qarfaaha biilka ee la fidiya waxaa looga isticmaalaa guryaha ganacsiga iyo guryaha caasimaad ee jiiyaddan, guudka, guryaha xafiiska, dhinaca waaweyn.
Guri xafiiska xafiiska ee furada
Dhismooyinka birta ee furada
Ka dambe :Wixid la xiriirta
Shaqada biilka ee aasaasiga ah
Aasaasiga birta fidiyay8 talab:1. Iskaad isticmaalid ee birka ee ee uu sidii waxyaabaha ee waxbarashada ah oo uu uu dhaqaalayso ee hore. Si aad u shaqeyso sida caadi ah, Waxaa baahnaa in uu qorsheyso ...
Lacagta la'aanta iyo xafiiska ee gaar ah ee gaar ah ah
1. Waxbarashada galvanizisa,Ganafyada bibWaa aan la arag ku hooseyso saamid iyo alkalka, gaar ah mid ah qaar yar ah, kuwaas oo ah uu uu sahan. oo la socoto jiilabka biirka ee ku saabsan. Dhammaan oo d...
Dhaqaashada birta fidiyayEe saddex ciidanka furan, waxaa laga heli kartaa guryaha caafimaad. Sidaas u qiimeeysaa qiimeedka qiimeedka waxbarashada guriga dibadda. Sugnaad xirfadda qaali ah, furaha weyn...
Waxyaabaha dabka ah waa midhaha waxyaabaha dabiilka ah oo ku yaal xarunta ku yaal lattisa dabeed ah oo ku yaal mashinka ee shirkada ama baadinka. Caawimaad ee daboolka ah waxaa looga isticmaalaa daboo...
3DPanelka dhinabkaTaxada Waxbarashada dhismaha 3D waxaa loo bixiyaa food dhismo baar ah, kuwaas oo lagu qabanayaa 3D tirada waxaa looga isticmaalaa derbiyada iyo xaqaalka. Diisooyinka weyn ee gur...
Daryeelka iskuulka dhismooyinka dhinabka
DiyadibDaryeelka iskuulka dhirka:(1) Goobta iskuulka dhismo ee korin ah waa in loo aqoonsan inta uu aqoonsaneysaa waxbarashada qorsheynta iyo xirfada xirfadda ee dhismo. Iskuulka dhismooyinka ee uu is...